CBS iyo Viacom waxay midoobeen ka dib sannadihii 13 oo ay kala maqnaayeen - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » DHAQAALAHA »CBS iyo Viacom waxay midoobeen ka dib sannadihii xiisada 13 - BGR
Falanqayn badan kadib, Viacom iyo CBS ayaa markale dib u mideeya ka dib sannadihii 13. Galabnimadii hore, labada shirkadood ee warbaahinta ayaa si rasmi ah u shaaciyey inay damacsan yihiin inay ku biiraan shirkad cusub oo la yiraahdo ViacomCBS. Marka midaynta la sharciyeeyo, agaasimaha guud ee shirkadda Viacom, Bob Bakish, ayaa hoggaamin doona shirkadda.
"CBS iyo Viacom waa maalin muhiim ah maanta marka aan isku darano awooddeena iyo awooddeena dhameystirka si aan uga mid noqono shirkadaha yar ee Bakish ku yiri war-saxaafadeed
Awoodeenna gaarka ah ee aan u leenahay soo saarista tayada iyo waxyaabaha caan ka ah dhagaystayaasha baaxada leh ee caalamka - annaga oo ah Aaladaha iyo wada-hawlgalayaasheena adduunka ayaa noo oggolaanaya inaan sare u qaadno ganacsigeenna maanta anaga oo meelaynayna sannadaha soo socda. inuu yimaado, ayuu raaciyay Bakish.
Runtii, mideynta cusub waxay siineysaa ganacsi leh liis aad u wanaagsan oo ku saabsan guryaha warbaahinta oo ay ku hoos shaqeyso dalladeeda, oo ay ku jiraan Showtime, MTV, BET, Comedy Central, iyo inbadan. Intaa waxaa sii dheer, ViacomCBS waxay hadda soo bandhigaysaa buugyaraha wax ka badan 140 000 qaybood oo telefishan iyo filimo 3 600 ah, oo ay ku jiraan cinwaannada liiska sida Star ugu celiso et Mission Impossible .
Si aan kuu siino fikrad ku saabsan xajmiga shirkadda cusub, war-saxaafadeedka ayaa tilmaamaya in Viacom iyo CBS ay ku bixiyeen bilyanno 13 bilyan doolar bilooyinkii ugu dambeeyay ee 12 wixii loogu talagalay. War-saxaafadeedka ayaa lagu caddeeyay istiraatiijiyad koritaanka saddex-qaybood ee shirkadda, sida soo socota:
Dardargelinta istiraatiijiyadda xiriirka tooska ah ee macaamiisha. Wadajir ahaan, shirkadda isku-dhafan waxay awoodi doontaa inay dardar-geliso oo ay ballaariso gaarsiinta macaamiisheeda iyada oo loo marayo saamiyo kala duwan oo la caddeeyay oo la soo bandhigo, bixinta iyo xayeysiinta labadaba. Tan waxaa ka mid ah CBS All Access iyo Showtime, oo gudbiya waxyaabaha aasaasiga ah, nool iyo baahida loo qabo, malaayiin macaamiil ah; Pluto TV, oo ah adeegga TV-ga ugu horreeya ee tooska ah ee Mareykanka. iyo badeecado waaweyni sida CBSN, ET Live iyo Noggin. Waxay sidoo kale fursad u leedahay inay ku korto adduunka oo dhan iyada oo ku xoojineysa awoodeeda ku-deeqidda ku-saleysan iyo hadiyado ay ku taageerto, maktabadaha la isku daro, awoodaha wax soo saarka iyo kaabayaasha caalamiga. . Ballaadhida iyo qoto-dheer ee isku-darka shirkaduhu waxay gaarayaan aagag dhaqameed iyo kuwa cusub - oo ay ku jiraan 22% ee daawadayaasha Mareykanka - waxay abuuri doonaan fursado qaybinta cusub iyo fursadaha xayeysiinta. Loogu talagalay soo-saareyaasha, tan micnaheedu waa dhisidda xiriir ballaadhan oo ballaadhan oo isku-duuban iyo adeegsiga faa'iidooyinka oggolaanshaha dib-u-gudbinta ee faylalka isku-dhafka ah. Xayeysiinta iyo wakaaladaha, shirkada isku dhafka ah waxay soo bandhigi doontaa warshado horseed u ah noocyo kala duwan, ooy kujiraan boortofooliyo kala jaad ah oo suuq geyn iyo xayeysiin xayeysiin ah, sida CBS Interactive, Viacom Vantage iyo Viacom Velocity, taasoo noqon doonta loo adeegsaday xalka weyn iyo si ballaaran. alaabada guud ee gorfeynta.
Samee soo-saare iyo shati-bixiyeyaal tayo sare leh oo ka kooban aaladaha saddexaad ee adduunka oo dhan. Maaddaama ay tahay mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee bixiya waxyaabaha quseeya adduunka, shirkadda iskuxiran ayaa si fiican loogu habeeyay inay u soo gudbiso waxyaabaha ay ka kooban tahay dhagaystayaal caalami ah oo kala duwan oo ay ka mid yihiin MVPDs, shabakadaha idaacadaha iyo fiilooyinka, adeegyada isgaarsiinta ku saleysan adeegga iyo qulqulka, bixiyayaasha adeegga mobilada iyo aaladaha bulshada. Muhiimad ahaan, marka lagu daro ruqsadda nuxurka, CBS iyo Viacom waxay soosaarayaan barnaamijyo ay tahay in laga kormeero shabakado dhinacyo badan leh iyo aalado si ay ula jaan qaadaan baahida weyn ee asalka u gaarka ah.
Isha Sawirka: Mark Lennihan / AP / Shutterstock
Sosucam, oo ah shirkad ka kooban Somdiaa, ayaa ku guuleysatey soosaarista duubitaankii 124 tan oo sonkor ah intii lagu guda jiray ololaha 2018-2019